Ndị ọzọ na-achọkwu e-commerce nke ndị ọrụ | ECommerce ozi ọma
Azụmahịa elektrọnik edebaola mmụba nke 12,5% ​​ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga n'ihi mgbochi mmegharị nke ndị Executive kwadoro na nso nso a site na nsogbu coronavirus. Onye isi oche nke onye ọrụ UNO logistics, Francisco Aranda kwuru, "Omume a na-egbochi ngagharị nke ndị mmadụ, ya mere na-ebelata ohere nke ife efe, na-agbakwunye na" dị ka otu azụmahịa azụmahịa, anyị na-arịọ na ọ bụrụ na ngagharị nke ngwongwo amachibidoro ”.
UNO ebipụtala yana Comisiones Obreras (CCOO) na UGT, ntuziaka akọwapụtara maka ngwa ọrụ na mpaghara njem. Ọ bụ akwụkwọ nwere nkwanye iji gbochie coronavirus ma ọ bụ ime ihe banyere ndị emetụtara. Ebumnuche nke ihe a bụ "inye udo, nghọta, ime ka omume kwekọọ ma kwado nhazi maka ụlọ ọrụ na ndị ọrụ," UNO mere ka ọ pụta ìhè.
Ebee ka ụfọdụ ndi mmadu na enye ndi mmadu ihe ha choro karie ndi ozo. Na ọnọdụ na pụrụ ịbụ nnọọ na-agbanwe ka ụbọchị na-aga site ugbu a gaba. N'echiche a, ekwesiri ịmara na otu n'ime nsogbu ndị enwere ike ibute mgbe ịrị elu a na njirimara nke onye ọrụ bụ na n'ikpeazụ ọ nwere ike iwepụta ụkọ ụfọdụ na, n'ihi ya, mkpuchi ọha na eze na-enweghị isi.
1 Ochicho na ahia eletrọniki: gini ka o na enye onye oru?
2 Ike ahia E-commerce n'oge nsogbu
3 Tụnyere nke online ahịa
4 Ọganihu akụ na ụba dị ala
Ochicho na ahia eletrọniki: gini ka o na enye onye oru?
Obi abụọ adịghị ya na mkpa nke ndị na-azụ ahịa na-akpali maka ịzụ ahịa kọmputa na mkpa nke ndị na-azụ ahịa inwe usoro nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu ndị na-enweghị ike ịfefe ụbọchị ndị a site na ọwa ọdịnala na azụmaahịa ha. N'ime usoro a, ọ dị mkpa ịmetụta uru ụlọ ọrụ ndị a na-eweta n'etiti ọha mmadụ.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ ịnweta ngwaahịa ndị na-enweghị ike ịzụta dị ka ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa nkịtị mechiri n'ihi iwu ndị ọzọ ewepụrụ na mba anyị. Dịka ọmụmaatụ, n'ịzụta ekwentị mkpanaaka, ihe metụtara teknụzụ ọhụrụ, uwe ma ọ bụ oge ezumike na ọrụ ọzụzụ, n'etiti ụfọdụ kachasị mkpa. Na nke ahụ na-ebu ihe karịrị otu uru na ịnyefe ụdị ahịa a na ntanetị. Dị ka ndị anyị ga-ekpughe site ugbu a gawa:
Inwe ike iku ya ngwa ngwa site n’ụlọ nke aka gi site na usoro di nfe na nhazi ya.
Ọ na -emekarị ọnụ ahịa asọmpi karịa site na ọwa ọdịnala ma ọ bụ karịa nke nwere ike inyere ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ aka ịchekwa ego site na mmalite ya.
Maka channeling ya, achọrọ ya naanị ka ịnwe kọmputa nkeonwe ma ọ bụ ụdị teknụzụ ọ bụla ka ị wee chọọ ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe site ugbu a gaa n'ihu.
A na-achịkwa ha site n'ụzọ dị iche iche nke ịkwụ ụgwọ, dị ka kredit ma ọ bụ kaadị debit, ịkwụ ụgwọ eletrọniki ma ọ bụ ọbụlagodi na ego ejiri eme ihe dịka Bitcoin.
Na mmechi, echefula na ịzụrụ ihe ntanetị a ga-enwerịrị nkwa nchekwa niile iji chekwaa arụmọrụ ma ọ bụ mmegharị nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ.
Ike ahia E-commerce n'oge nsogbu
Nke a nwere ike ịbụ ngalaba nke nwere ike ịbelata n'oge nsogbu akụ na ụba siri ike. Ruo n'ókè ha nwere ike igbanye a uru usoro na ọ dị mma na ị na-etinye ha na akaụntụ site na oge a. Dịka ọmụmaatụ, site na omume ndị a anyị ga - egosi gị n'okpuru:
Ọ bụ ezie na ọchịchọ ahụ amụbaala, ọ ka edobeghị anya na imirikiti ụlọ ọrụ na-anata iwu ndị a ga-enwe ike igbo ya. Nke a bụ n'ihi na onye na-ebubata ngwa ahịa na ngwaahịa bụ China, mba kachasị emetụta ya na onye bidoro coronavirus.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bụ ngalaba nke nwere ike inwe mmeri n'ihi oge ọzọ n'efu na ndị ọrụ. N'echiche a, ekwesịrị ịghọta na mmụba nke oge n'efu na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-amanye ịnọ n'ụlọ na-emepụta a ịbawanye ojiji nke ọrụ ntanetị na nbudata vidiyo vidiyo. Ọ bụ otu n'ime ụzọ ha si eji oge awa iche ha na-atụrụ ndụ. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị nke na-enye ngwaahịa ndị a nwere ike irite uru na nke a, dịka ọ na-eme n'oge ahụ na ntiwapụ nke coronavirus.
N'ime ọnọdụ a pụrụ iche ma sie ike n'otu oge ahụ, enweghị obi abụọ ọ bụla na n'oge a enwere ike ịsị na eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ obodo dị iche iche na enwere mgbochi na njem, na-emepụta ọganihu na ntanetị na-eweta n'ụlọ . Na uzo ozo nke oge ezumike na nkuzi nke kariri n’oge ndi ozo.
Tụnyere nke online ahịa
N’echiche a, ọnụọgụ ndị ahụ doro anya iji gosi na mmadụ iteghete n’ime ndị ahịa iri na - atụle ọnụahịa ọnlaịnụ tupu ịzụta ngwaahịa. Nke a na-ekpughe site nnyocha e mere site ihe dị mkpa mkpuchi comparator na oge nke Bọchị Ndị Ahịa. Oge a na - eme na Machị 15 ọ bụla na ụlọ ọrụ ejirila dokwuo anya ajụjụ ụfọdụ gbasara omume ndị Spen.
Kpọmkwem, 93% nke isiokwu a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ha na-enyocha ọnụahịa n'ịntanetị mgbe ha zubere ịzụta ngwaahịa ọhụrụ. Na mgbakwunye, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-eme, mezue nzụta n'ịntanetị. Ebumnuche dị mfe: mara ọkwa ma belata ọnụahịa. Ma ọ bụ na ịtụnyere na-enye anyị ohere ịchekwa ihe ruru 50% na ụfọdụ ọrụ. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, mkpuchi ụgbọ ala, mana ọ bụghị naanị otu.
Ọbụghị naanị mma maka ịzụ ahịa na usoro ntanetị bụ mmalite nke mkpebi onwe onye nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, n'ụzọ dị iche, ọ bụ omume na-emeju ọchịchọ nke akụkụ dị mma nke ndị a iji soro ndị ahịa na-azụ ahịa. Ruo n'ókè nke na enwere ike ịkọwa ya na ọ bụ ihe na-aga n'ihu na afọ ndị na-adịbeghị anya na ọ nwekwaghị nlọghachi n'afọ ndị na-abịanụ. Dika egosiputara na akuko ndi akuko ohuru, nke n’enye ndi nzuzu banyere uzo a gha adi site ugbua gawa, karisia n’aho ma obu ato n’iru.
Ọganihu akụ na ụba dị ala
N'ime ọnọdụ a nke azụmahịa kọmputa na-agagharị ugbu a, ọ dị mkpa iburu n'uche otú coronavirus nwere ike isi metụta ọrụ akụ na ụba na ọkwa ụwa. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na ruo oge ahụ ọnọdụ dị iche iche nke ndị ọrụ akụ na ụba na nke ego na-achịkwa bụ na ntiwapụ nje ahụ na-ebelata mmụba GDP nke China na gburugburu 0,3% afọ a, ruo 5,6% na ụwa gburugburu 0,15%, rue 2,6% ma ọ bụ 2,5 %. Otú ọ dị, ọnọdụ ahụ nwere ike ịdịwanye njọ ma ọ bụrụ na enweghị ike ịba coronavirus na ụbọchị ndị na-abịanụ. N'echiche a,
Mana nke megidere, azụmaahịa kọmputa nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-anọchi anya ya nwere ike ịpụta na ike pụrụ iche na oge njikọ ugbu a. N'ihi na eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ obodo dị zuru ezu iche na enwere mgbochi na ịgagharị, ọ na-ewepụta oganihu na ntanetị na ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, yana ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ metụtara njikọ ntụrụndụ na ọzụzụ. Ruo n'ókè ha nwere ike ịhụ na ahịa ha ka mma na ọnwa ndị a dị mgbagwoju anya maka ndị ọrụ niile.
Enweghị ike ichefu na n'ime kedu ihe ga - eme n'ọdịnihu nke azụmaahịa kọmputa na afọ ndị na - abịanụ, ngalaba a metụtara akụnụba ụwa niile abụrụla ihe na - enweghị isi ebe ọ bụ na azụmahịa izizi nke mbụ nke 90s ruo taa . N'ụzọ na-aga n'ihu na ịtọ ntọala ya n'ime ngalaba azụmaahịa a. N'agbanyeghị oghere ndị ọ na-eweta n'oge ahụ nke ndị ọkachamara ghọtara nke ọma.
Ebe ọ dị mkpa iji gosipụta na ọ bụ ezie na ọchịchọ ahụ amụbaala, ọ ka edobeghị anya na imirikiti ụlọ ọrụ na-enweta iwu ndị a ga-enwe ike imeju ya. Nke a bụ n'ihi na onye na-ebubata ngwa ahịa na ngwaahịa bụ China, mba kachasị emetụta ya na onye bidoro coronavirus. Site na nke a, ọ naghị enwe mmetụta ọ bụla ọ nwere ike inwe na akụ na ụba ụwa dịka nke ọnwa Machị. Mana n'aka nke ọzọ, ọ na - enye ọtụtụ ọdịiche n'ọtụtụ azụmaahịa ya karịa na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ mpaghara ọdịnala. Ruo n'ókè na ọ nwere ike ịbụ ezigbo ohere azụmaahịa n'ọtụtụ oge. Dika egosiputara na akuko ndi akuko ohuru nke gosiputara n'ime onwa ndi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ndị ọrụ na-achọkwu e-azụ ahịa